China CPL-Coil to Coil Polishing Line factory na ndị na-eweta ya | Zhongshuo
A na-etinyere CPL tumadi maka iwepu obere ntụpọ na mkpuchi mpịakọta SS na mmiri, nweta ngwụcha ịchọ mma, ntụgharị No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Na coolant nwere ike ịbụ emulsion ma ọ bụ ịnweta mmanụ. Sisọcha nhịcha na usoro nhichagharị dị mkpa maka ahịrị zuru oke. Ezubere ZS CPL maka eriri mpịakọta oyi ka ọ ga - arụ ọrụ site na nha 100 ruo 1600 mm na ọkpụrụkpụ n'etiti 0.4 ruo 3.0 mm. WUXI ZS na-enyekwa CPL akọrọ. A ga-etinye eriri eriri Cork iji nweta ngwụcha ahụ yiri ...
A na-etinyere CPL tumadi maka iwepu obere ntụpọ na mkpuchi mpịakọta SS na mmiri, nweta ngwụcha ịchọ mma, ntụgharị No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Na coolant nwere ike ịbụ emulsion ma ọ bụ ịnweta mmanụ. Sisọcha nhịcha na usoro nhichagharị dị mkpa maka ahịrị zuru oke. Ezubere ZS CPL maka eriri mpịakọta oyi ka ọ ga - arụ ọrụ site na nha 100 ruo 1600 mm na ọkpụrụkpụ n'etiti 0.4 ruo 3.0 mm. WUXI ZS na-enyekwa CPL akọrọ. A ga-etinye eriri eriri Cork iji nweta ngwụcha yiri nke Scotch-Brite finishing (SB), na-enye nri ọsọ nke CPL akọrọ nwere ike ịbụ 50m / min ma ọ bụ karịa.
Uru nke ZS CPL
1. Onye na-eweta ihe ndozi, ZS na-enye ahịrị zuru oke gụnyere Unwinder, Rewinder, Loading Car, Pinch Roll, Flattener, Mkpụrụ Shear, asacha na ihicha usoro, akwa mkpuchi PVC. N'otu oge ahụ anyị na-enye Coolant Filtration and Recycling Sistem, Mist Collector, Igwe ọkụ Ọkụ na Igwe Nkụ.
2. Enweghị ntụpọ na akara mkparịta ụka site na ahịrị
3. Ahịrị ọsọ dị ka 40m / min max.
4. Line kwesịrị ekwesị maka nrụpụta na-aga n’ihu n’ime awa 24
5. Igwefoto eji emebeghi aka ya di elu. Welding Seam Tracking Sistem (ọkaka nhọrọ na welder)
6. Ọrụ na mmezi enyi na enyi
Erialdị ihe: Ihe mkpuchi igwe anaghị agba nchara
Ike akụrụngwa Max:
Obere min / Max ihe ọkpụrụkpụ:
Oghere obosara min / max:
Ihu igwekota Max na ntinye:
Ntinye oghere dị n'èzí dayameta min / max:
Ntinye eriri olu n’ime:
Ihu igwe mkpuchi Max na mbido ọpụpụ:
Wepụ coil dayameta min / max:
Wepụ eriri n'ime imepụta:
Speedgba ọsọ ọsọ:
Max. 40 maka ntughari.5-35m / min maka nhazi
Nke gara aga: SPL-mpempe akwụkwọ gaa na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ